Probux Company PTC Site ၏ လှို့ဝှက်ချက်နှင့် Premium Proxy တို့၏စွမ်းအား [သို့] Probux မှ အချိန်တိုတို အတွင်း ငွေများများ ရှာဖွေနည်း | zawthwin(android software/gameနှင့်မြန်မာစာအုပ်စင်) ကိုဇော်သွင်မျှဝေပေးပြီ
Probux Company PTC Site ၏ လှို့ဝှက်ချက်နှင့် Premium Proxy တို့၏စွမ်းအား [သို့] Probux မှ အချိန်တိုတို အတွင်း ငွေများများ ရှာဖွေနည်း
Posted on October 25, 2013 by zawthwinကိုဇော်သွင်(စန္ဒယား နှင့် ကီးဘုတ်)	အခုအချိန်မှာ Myanmar IT Helper ရဲ့ ကြိုးပမ်းမှုကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ မှာလဲ PTC တွေ စတင်ခေတ်စားလာတာကို တွေ့ ရပါတယ်။နိုင်ငံခြားမှာတော့ တော်တော်ကြီးကို ခေတ်စားနေပါပြီ။ Paid To Click တွေဟာ ဟိုးအရင် ကတည်းက ရှိတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ ဟိုးအရင်တုန်းက နိုင်ငံခြားမှာတော့ ဘယ်သူမှ စိတ်မ၀င်စားသေးဘူးဗျ။ PTC ဆိုတာ အလိမ်ကြီး၊တချို့ကြလဲ ဘာမှန်းမသိဘူး ဆိုပြီး၊ တချို့ကြတော့လဲ အလကား အာပလာ၊ ဘယ်လောက်မှ မရဘူး ဆိုပြီးလုံးဝ ဂရုမစိုက်ကြတာပါ။ အဲ့ဒီအချိန်တုန်းက Probux Company လေး စတင်ပေါ်ကာစအချိန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ PTC တွေ ပေါ်ကာစကအားလုံးကို စိတ်ဝင်စားအောင်ဆိုပြီး အမျိုးမျိုး တိုက်တွန်း၊ Promotion တွေ ပေးရပါတယ်။ Referral ကနေပြီးမှ ငွေပြန်ဝင်တဲ့ System တွေထည့်ထားပေးရပါတယ်။ ပိုပြီးတော့ ပြန့်ကျက်အောင် ဆိုပြီးပေါ့။ဒါပေမဲ့လည်း အဲ့ဒီအချိန်တုန်းက တော်တော်ကို သိတဲ့ သူ တော်တော်နည်းပါတယ်။ အခုမှသာ တစ်ဆိုဒ်ပြီး တစ်ဆိုဒ် အပြိုင် အဆိုင်တွေ လုပ်လာကြတာပါ။ Referral သာ မရှိရင် အောင်မြင်လာစရာ အကြောင်းကို မရှိပါဘူး။အဲ့ဒီလို လူစိတ်ဝင်စားမှု အလွန်နည်းပါးတဲ အချိန်မှာ Probux Company က ထပ်ပြီး သုံးတဲ့သူတွေများလာအောင် ဘာလုပ်ပေးခဲ့လဲဆိုရင် အချိန်တော်တော်ကြာ Probux Company မှာ ရှိနေပြီး ငွေပမာဏ များများရထားရင်သူ့ရဲ့ လက်အောက်မှာ လာပြီး Register လုပ်တဲ့ သူတွေကလည်း နည်းနည်း များပြီး ပိုရမယ်။ ဥပမာ- ကလစ်စရာ ကြော်ငြာပိုတိုးလာမယ် ဆိုပြီး Feature တစ်ခု ထပ်ပြီး လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ Probux Company ကနေပြီးတော့မှာ သူတို့ Company ရဲ့ Referral တစ်ခု ထုတ်ပေးတယ်။ ဒီအကောင့် အောက်ကနေပြီးတော့မှ Member ၀င်ကြပါ။ အဲ့ဒီအကောင့်အောက်မှာ ၀င်တဲ့ သူတွေဟာ ငွေပိုရကြပါတယ်။ လို့ ကြေငြာပေးပြီး တကယ်လဲ ကြော်ငြာ ကလစ်စရာတွေကို ပိုတိုးပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုနဲ့ ပဲ Probux ဟာ တစ်စထက် တစ်စ ပိုပိုပြီး အောင်မြင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင် Probux Company ရဲ့ သက်တမ်းဟာ9နှစ်ရှိသွားပြီး ကမ္ဘာ အဆင့် Alexa Rank: #562 နဲ့ ရပ်တည်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးပဲ သေချာအောင် ဒီလင့် http://www.statscrop.com/www/probux.com မှာသွားကြည့်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော့် အနေနဲ့လည်း ကျန်တဲ့ PTC Site တွေကို စုံစမ်းကြည့်သလောက် nerdbux.com ဆိုရင် 8 months တို့၊ the-bux.net တို့ဆိုရင် 10 months တို့ အဲ့လောက်ပဲ ရှိသေးတာဖြစ်လို့ သူတို့က Probux လောက် မယုံကြည်ရပါဘူး။ငွေတစ်ကယ် ပေးပေမဲ့ ရေရှည် အလုပ်လုပ်လို့ မရနိုင်သလို Domain ကို Register လုပ်ထားတာကလဲ 1 နှစ်ထဲပဲ ဆိုတာကို တွေ့မြင်ရပါတယ်။Probux.com က Domain ကာလကုန်ဆုံးဖို့ နောက်ထပ်ရက်ပေါင်း 2000 ကျော် နောက်ထပ်7နှစ်နီးပါးတောင် ကျန်ပါသေးတယ်။ကုန်ခါနီးရင်လည်း သက်တမ်းထပ်တိုးမယ်ထင်ရပါတယ်။ အဲ့ဒါကို ကြည့်ချင်းအားဖြင့် သူတို့ တကယ် အလုပ်လုပ်တယ်လို့ မှတ်ယူလို့ ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော် Probux ကို ယုံကြည်လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော့် အနေနဲ့ ပြောချင်တာကတော့ ငွေပေးတာနဲ့ ယုံကြည်တာနဲ့ ဘာမှ မဆိုင်ပါဘူး။ ငွေတကယ်ပေးပေမဲ့ အခုလို ၁ နှစ်၊ ၂ နှစ်ပဲ ရှိနေရင် တစ်သက်တာ အားကိုးလို့ မရပါဘူး။ Probux ကတော့ မိတ်ဆွေတို့ မြင်တဲ့ အတိုင်း ငွေလဲ တစ်ကယ်ပေးတယ်။ သက်တမ်းလဲ ရင့်တယ် ဆိုတော့ ကျွန်တော် အ အပြည့်အ၀ ယုံကြည်လိုက်ပါတယ်။ ပြထားတဲ့ ပုံကတော့ ဒီလ 12 ရက်နေ့ကမှ ထုတ်ထားတာပါ။🙂
ဒီလို ကျွန်တော် ၄င်း PTC Site ဟာ အမှန်အကန်လို့ ကိုယ်တိုင် ယုံကြည်တဲ့ အတွက် အားလုံး အတွက် စေတနာနဲ့ Probux Company အကြောင်းလှို့ဝှက်ချက်တစ်ချို့နဲ့ အချိန်တိုတို အတွင်းမှာ ငွေများများရအောင် ဘယ်လို ငွေရှာ ရမလဲ ဆိုတာကို ရေးသား ဖော်ပြ ပေးလိုက်ပါတယ်။ အချိန်တိုတိုအတွင်း ငွေများများရရေး လှို့ဝှက်ချက်ကြီးကို အဓိက ကူညီပေးနေတာကတော့ ကျွန်တော့် ရဲ့ လက်ဆောင် Daily Premium Proxylist လေးတွေပါပဲ။ဒါပေမဲ့ ProxyList ရှိသော်လည်း မလုပ်တတ်ရင် ကျွန်တော်တို့ တွေ အဘန်းခံ ပြီး လျှောဘရားသား ဖြစ်မှာပါ။ အဲ့ဒီလိုမဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ဆိုတာကို ကျွန်တော် အားလုံးကို ပြောပြပေးသွားမှာပါ။ အခုမှ စိတ်ဝင်စားတဲ့ သူတွေ အနေနဲ့လည်း စတင်လုပ်ကိုင်နိုင်သလို၊ အကောင့် ရှိပြီးသား သူတွေလဲ ကျွန်တော်နည်းလမ်းကို လိုက်ပြီး လုပ်နိုင်ပါတယ်။ အားလုံး Probux မှာ အကောင့် အသစ်တွေ ဖောက်ဖို့ လိုပါတယ်။ အခုမှ စတွေ့ဖူးတဲ့ သူတွေရော ပါ လုပ်ကိုင်နိုင်အောင် အသေးစိတ် တစ်ချက်ချင်း လုပ်ပြထားပါတယ်။
ကျွန်တော်ကတော့ ကျွန်တော့ Referral ကို ယူသုံး စေချင်ပေမဲ့လဲ မိတ်ဆွေတို့က ယူသုံးချင်မှ ယူသုံးမှာ ဆိုတော့ မပြောတော့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကလစ်စရာ များများ ပေါ်ပြီး ငွေများများ ၀င်ချင်ရင်တော့ Probux Company က ချပေးတဲ့ Referral ကို အသုံးပြုသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့် Referral ကို ယူသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ SJelly ပါ။ http://www.probux.com/?r=SJelly ကိုသွားပြီး Register လုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့် Referral ကို မသုံးချင်ဘူး ဆိုရင်တော့ http://www.probux.com ကိုပဲ သွားပြီး အောက်မှာပြထားတဲ့ အတိုင်း Step By Step အကောင့် အသစ်ဖောက်ပါ။ Probux အကောင့် မရှိသေးလို့ အခုမှ စလုပ်မဲ့ သူတွေ ရော၊ ရှိပြီးသားလူတွေရော Step 1 ကနေ စလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မိမိမှာ အကောင့် ရှိပြီးသားဆိုရင်တော့ ယခု IP နဲ့ မရတော့ပါဘူး။ ယနေ့ အတွက် Premium Proxylist ကို ဒေါင်းပြီး Proxy နဲ့ ၀င်ပြီး လုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့ဆီမှာ နေ့တိုင်း Premium Proxylist တွေကို လာယူလို့ ရပါတယ်။ အကယ်လို့ တင်မပေးရသေးဘူးဆိုရင်တော့ http://www.share4mm.com မှာ Contact To Tech Milo မှာ လာပြီးတော့ Proxy List လေးများ ပေးပါဦးလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ပုံမှန်ဆိုရင် Premium Proxy List လေးတွေက ၄နာရီကနေ ၅ နာရီကြား mail ရောက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ Premium Proxy လေးတွေက ၂ ရက် အထိ ခံပါတယ်။ ကျွန်တော် ပြောချင်တဲ့ လှို့ဝှက်ချက်ကတော့ အဲ့ဒါပါပဲ။ Premium Proxy သုံးပြီး အကောင့် အသစ်ဖောက်တာပါပဲ။ ကိုယ်က သူများကို Referral ပေးတယ်ဗျာ။ သူတို့က သုံးချင်မှ သုံး ဦးမှာ။ ပြီးတော့ နေ့တိုင်း ကလစ်ချင်မှ ကလစ်မှာလေ။ ကိုယ့်ဖာသာကို နောက်ထပ် ကိုယ့် Referral သုံးပြီး Premium Proxy List နဲ့ အကောင့် အသစ်ဖောက်တော့ ကိုယ်တိုင် နေ့တိုင်းလဲ ကလစ်ရတယ်။ သူများကိုလဲ ဒုက္ခပေးစရာ မလို။ ပြီးတော့ ဘယ်အချိန်ထ ကလစ်၊ ကလစ် ကိုယ်ကပဲ ငွေဝင်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ အကောင်းဆုံးက ကိုယ့် Referral ကိုယ်ယူသုံးပြီး ကလစ်တာပါပဲ။ ကျွန်တော့် အနေနဲ့ အကြံပြုချင်တာကတော့ အခု ပထမ အကောင့်ဖောက်ရာမှာ Probux Company က ဟိုးရှေးတုန်းက ချပေးခဲ့တဲ့ Referral နာမည်ကို ထည့်ပြီးရင် နောက်တစ်ကောင့်မှာ ကျမှ ကိုယ့် Referral ကိုယ် သုံးပြီး အကောင့် အသစ် ဖောက်တာဟာ မိမိ အတွက် အချိန် အတိုအတွင်း ငွေ ပမာဏ အများအပြားဝင်ပါလိမ့်မယ်လို့ ပြောကြားလိုက်ရပါတယ်။ ကြိုက်သလောက် Proxy နဲ့ ဖောက်လို့ ရတယ် ဆိုပေမဲ့ PayPal Account က ရှိရဦးမှာပါ။ ဒီတော့ မိမိမှာ PayPal Account ၂ ခုရှိရင် Probux အကောင့် ၂ ခုပဲ ဖောက်တာက ပိုအဆင်ပြေပါတယ်။မဟုတ်ရင် ProBux အကောင့် ၂ခု PayPal တစ်ခုထဲ ဆိုရင် ရိပ်မိသွားပြီး အဘန်းခံရနိုင်ပါတယ်။
အားလုံးကို အနည်းငယ် စတိသဘော ပြောပြီးသွားပြီဆိုတော့ အားလုံး အသေးစိတ် စလိုက်ကြရအောင်..
Step 1 ) http://www.probux.com ကို သွားပါ။ ကျွန်တော့ Referral ကို သုံးချင်တဲ့ သူတွေက http://www.prebux.com/?r=SJelly ကိုသွားပေးပါ။အောက်ပါပုံ အတိုင်း တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
Step2) ပုံမှန် ဆိုရင်တော့ Register လုပ်ရမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ အားလုံး အခုမှ အကောင့် အသစ်လုပ်မဲ့ သူတွေရော၊ အရင်လုပ်ပြီးသား ရှိလို့ အခု အကောင့် ထပ်လုပ်မဲ့ သူတွေရော အားလုံး အောက်ကပုံ အတိုင်း လိုက်လုပ်ပါ။ Probux Website မှ ရှိနေတဲ့ Cookie တွေကို ရှင်းရပါမယ်။အောက်မှာ လုပ်နည်းကြည့်ပါ။ ကမ္ဘာလုံး မည်းမည်းလေးကို ကလစ်လိုက်ပြီး More Information.. ကို ဆက်ကလစ်ပါ။
ပြီးရင် အောက်က အတိုင်း တွေ့ရပါမယ်။ ၁) View Cookies လုပ် ၂) Clear All Cookies လုပ်ပစ်ပြီး Close လိုက်ပါ။
Step3) အဆင့် သုံးကိုတော့ အခုမှ အကောင့် အသစ်လုပ်မဲ့ သူတွေ မလိုအပ်ပါဘူး။ မိမိ အရင် Probux မှာ အကောင့် လုပ် ဖူးတဲ့ သူတွေ ကတော့ အောက်က အဆင့် လိုအပ်ပါတယ်။ Proxy ထည့်တာပါ။ဘယ်သူနဲ့ မှ မတူအောင် ကျွန်တော့် Website က Daily Premium Proxylist ကို ဒေါင်းပြီး Proxy Check Tool နဲ့ စစ်ဆေးပါ။ စစ်ဆေးပုံ စစ်ဆေးနည်းကို Proxy Checker ထဲမှာ တစ်ခါထဲ ထည့်ပေးထားပါတယ်။အဲ့ဒီကနေ မိမိ ကြိုက်တဲ့ တစ်ခုကို Copy ကူးလားပြီး အောက်ပါ အတိုင်း ထည့်ပေးပါ။ Tools > Options > Advenced > Network > Settings ဆိုပြီး အောက်ကလို Proxy ထည့်ပေးလိုက်ပါ။ ပြီးရင် OK ပေးပြီး ရင် ရပါပြီ။
OK ပေးပြီးတာနဲ့ Proxy အလုပ်၊ လုပ်မလုပ် သိဖို့ www.whatismyipaddress.com ကို သွားပြီး စစ်ဆေးကြည့်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့။ စစ်ပြီးတာနဲ့ မိမိသုံးတဲ့ နိုင်ငံကို မှတ်ထားပါ။ China ဆိုရင် China, US ဆိုရင် US သေချာ မှတ်ထားပါ။ နောက်တစ်ခါ Log In ၀င်ရင် တွေ့ ကရာ နိုင်ငံက နေပြီမှ ၀င်လို့ မရပါဘူး။ကိုယ်သုံးတဲ့ နိုင်ငံရဲ့ IP ကနေပဲ ၀င်ရပါမယ်။
အဆင့်4) အပေါ်က အဆင့် တွေလုပ်ပြီးသွားပြီ ဆိုရင်တော့ Probux.com မှာ Register ဆိုတဲ့ သောခတ်ထားတဲ့ ပုံလေးကို ကလစ်လိုက်ပါ။ အောက်ကလို တွေ့ ရပါလိမ့်မယ်။ အဲ့မှာ တစ်ခုချင်း ထည့် ပေးပါ။ Referrer နေရာမှာ Probux Company ကပေးထားတဲ့ အတိုင်း probuxcompany လို့ ထည့်ပေးသင့်ပါတယ်။ ကျွန်တော့် Referral >> SJelly ကို ထည့်ပေးလဲ ရပါတယ်။ကျွန်တော်ကကျတော့ $90 ပဲ အများဆုံး ရထားသေးတာ မို့ပါ။ ပြီးတော့ လုပ်ထားတာလဲ မကြာသေးတဲ့ အတွက် ကြောင့်ပါ။ကျန်တာကတော့ မိမိ ခါတိုင်းကလို ဖြည့်သွားပါ။ Password ကို မိမိရဲ့ email ရဲ့ Password နဲ့ မတူစေသလို မိမိ အလွယ်တကူ မှတ်မိနိုင်တာကို ထားပါ။ အောက်ပါအတိုင်း ကြည့်ပါ။
ပုံအကြီးမြင်ချင်လျှင် ပုံကို Right Click နှိပ်ပြီး Open In New Tap လုပ်လိုက်ပါ။
နောက်တစ်ခါ မိမိက Proxy သုံးပြီး အခုလို အကောင့်အသစ်လုပ်ရင်တော့ Referrer နေရာမှာ အခုလုပ်ထားတဲ့ Username ကို ထည့်ပေးဖို့ မမေ့ပါနဲ့။ [ အရေးကြီးပါတယ်။ ]ပြီးရင် Create My Account ကို နှိပ်လိုက်ပြီး နောက်တစ်ဆင့်ကို သွားပါ။ Step5) မိမိ အသုံးပြုထားသည့် Email သွားစစ်ပေးရပါမည်။ Mail တွင် အောက်ပါနှင့် ပုံစံတူ တွေ့ရမည်။
ပုံထဲ က အတိုင်း Link ကို ကလစ်ပေးပြီးရင် အောက်ပါအတိုင်း Message ရောက်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Congratulations, သင့်၏Username လို့ ပေါ်လာတာနဲ့ အကောင့်က Confirm လုပ်လို့ပြီးသွားပြီ GO TO MY ACCOUNT ဆိုတဲ့ Buttom လေးကို နှိပ်ပြီး သွားလိုက်ပါ။
Step6) မြားပြထားတဲ့ အတိုင်း View Ads ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ အောက်ကပုံ လိုလေး တွေ့ ရပါလိမ့်မယ်။ အောက်မှာမြင်ရတဲ့ အတိုင်း အားလုံးက အပြည့် အရောင်လေးတွေ ထင်းနေတာ မြင်ရပါလိမ့်မယ်။
အဲ့မှာ ပုံမှာ အစိမ်းဝိုက် ပြထားထာ လေးကို ကလစ်လိုက်ပါ။ New Page ထွက်သွားပြီး သင့်ကို ကြော်ငြာပြပါလိမ့်မယ်။5 Sec ကျော်ကျေ်ာလောက်ကြာတော့ အောက်ကလိုလေး တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ မိတ်ဆွေက ကြော်ငြာ ကြည့်ပေးတဲ့ အတွက် $0.001 ရရှိသွားပါပြီ။ မြန်မာငွေ တစ်ကျပ် နှစ်ကျပ်ပါ။ တော်တော် ကို နည်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သင်က တကယ် ငွေရတာဖြစ်သလို တစ်ခါ ကြည့်ပေးလို့ တစ်ကျပ်က မတန်ဘူး ထင်ရပါတယ်။ နောက်တော့ တန်လာပါလိမ့်မယ်။အခုတော့ အခုလို တစ်ခု မြင်တာနဲ့ တစ်ခု ပိတ်ပစ်ပြီး နောက်တစ်ခု ကြည့်ပေးပါ။
ကြော်ငြာ တွေကို အကုန်ကြည့်ပါ။ probuxcompany ကနေ Referral ယူထားရင်တော့ ကြော်ငြာ ကလစ်ရမှာတွေက ပထမ တစ်ရက်တော့ မသိသာပေမဲ့ နောက်ရက်တွေမှာ တော်တော် သိသာလာပါတယ်။ အားတိုင်း အကောင့်ထဲ ၀င်ကြည့်တာနဲ့ ကလစ်ဖို့ က အမြဲတမ်း ရှိနေသလို ကလစ်စရာကလည်း တဖြည်းဖြည်းနဲ့ တိုးလာတာ တွေ့ ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ အားလုံး SJelly လေးကိုပဲ Referrer နေရာမှာ ထည့်ပေး စေချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့် မှာလဲ ငွေ က ၀င်သင့် သလောက်ဝင်ထားပါတယ်။ မိတ်ဆွေ တို့ အတွက် အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။
နောက်ထပ် အကောင့် ကို ကျွန်တော် ပြောတဲ့ အတိုင်းပဲ Cookies ကို Clear လုပ်ပြီး Proxy ကို နိုင်ငံ အသစ်ကို သုံးပြီး အကောင့် နောက်တစ်ခု ထပ်လုပ်ပါ။ ပြီးရင် Referrer နေရာမှာ အခုသုံးထာတဲ့ Username ကို ထည့်ပေးပါ။ ၃ရက် ၄ရက် အတွင်း $0.6 ရလာပါလိမ့်မယ်။ အခု ပိုင်း ဟာ အရေး အကြီး ဆုံး အပိုင်း ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
1 ) $0.6 ရလျှင် Rent Referral ၀ယ်ပါ။ ၀ယ်ဖို့ အတွက် Add funds ကို နှိပ်ပေးပါ။ ပြီးရင် မိမိ ရဲ့ $0.6 ကို ဆိုတာကို ရွေးပေးပြီး ထည့်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် Rent Referral ၀ယ်ပါ။ အဲ့လို ကလစ်လိုက် ထည့်လိုက်နဲ့ Rent Referral 200 ရောက်ရင် ရပ်ပေးပါ။ ပြီးတော့ မှ ကလစ်လိုက် ထည့်လိုက် Recycle လုပ်လိုက် လုပ်ပေးရပါမယ်။
2) Rent Referral အတွက် Auto Run ကို ကလစ်ပေးပါ။ ဒီလိုနဲ့ နောက်ထပ် $85 ရရင် Standart Member ကနေ Golden Member ကို ပြောင်းပါ မမေ့ပါနဲ့။
အဲ့ဒီ Golden Member ကိုလဲ Rent Referral များနိုင်သမျှ များအောင်ထားပြီး လို့ ငွေ ပိုပြီး ဆိုတော့မှာ PayPal ကနေ ထုတ်ပါလို့ ပြောကြားလိုက်ရပါတယ်။
အခုလောက်ဆိုရင် Premium Proxy List ကို သုံးပြီး လုပ်လို့ရသွားပြီးလို့ ထင်မြင်ပါတယ်။တကယ်ကတော့ Myanmar IT Helper ပြောထားသလို Rent Referral ရဖို့ပါပဲ။အဲ့ကောင်လေးနဲ့ ပဲ လုပ်စားရတာပါ။
ProGrid တို့, Micro Jobs တို့ စသည်ဖြင့်လုပ်ပြီး ငွေရှာလို့ ရပေမဲ့ ကျွန်တော့် အနေနဲ့ ကံစမ်းမဲ့ နိုင်တာထက် နောက်တစ်ကောင့်နဲ့ ၀င်ပြီး ကြော်ငြာ ကလစ်စေချင်ပါတယ်။
သတိပြုရမည့် အချက်များ—————————1) မိမိ Log In ၀င်ခါနီးတိုင်း Cookie များကို ရှင်းလင်းဖို့ မမေ့ပါနှင့်။2) Proxy နဲ့ ၀င်ရာတွင် မိမိ အသုံးပြုသည့်နိုင်ငံ ကို မှတ်ထားပြီး အကောင့် တစ်ခုကို နိုင်ငံ တစ်ခုနှင့်ဝင်ပါ။3) Proxy ထည့်သွင်းပြီးတိုင်း www.whatismyipaddress.com သို့ tracemyip.org သို့ဝင်ရောက်ပြီး အလုပ်လုပ်မလုပ်စစ်ပါ။ Connection လေးနေလျှင် တခြား Proxy ကို ယူသုံးပါ။4) PayPal, PayZa စသည့် အကောင့် တစ်ခုထဲဖြင့် အသုံးမပြုသင့်ပါ။ ၂ခု၊ ၃ခု စသည်ဖြင့် မိမိ Probux အကောင့် လုပ်ထားသလောက် PayPal,Payza အကောင့် ရှိထားသင့်ပါသည်။၅) နောင်တစ်ချိန် အခါအား လျှော်စွာ သတိပြုရမည့် အချက်များကို ပြောကြား ပေးသွားပါမည်။
ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ Probux Company PTC Site၏ လှို့ဝှက်ချက်နှင့် Premium Proxy တို့၏စွမ်းအား [သို့] Probux မှ အချိန်တိုတို အတွင်း ငွေများများ ရှာဖွေနည်း ဆိုတဲ့ အတိုင်းပြောပြပေးပြီးသွားပါပြီ။ Rent Refferal ၀ယ်တာ, Recycle လုပ်တာ စသည့် အသေးစိတ်ကို http://makingmoneytutorial.weebly.com/ မှာ သွားကြည့် လို့ ရပါတယ်။ MM IT Helper အချိန်အကုန် ခံပြီးတော့ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ ကျွန်တော် ပြောချင်တာကတော့ ငွေကို PayPal ထဲကနေ ထုတ်ရာမှာ Golden Member အဖြစ်ရောက်မှပဲ ထုတ်ပါ။ မဟုတ်ရင် အချိန်ကြာပါတယ် လို့ ပြောကြားရင် နိဂုံးချုပ်အပ်ပါတယ်။
ပြောချင်တာ ရှိရင်၊ မေးချင်တာ ရှိရင် မူရင်းလင့် မှာ လာရောက်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ် ခဗျာ..
ကဲ အားလုံး အဆင်ပြေပါစေဗျာ… မေတ္တာ စေတနာဖြင့် Steel Jelly [Miloboy Inc.] Share this:TwitterFacebookLike this:Like Loading...
← Fruity Loop 10 PDF	HUAWEI နောက်ထွက်ဖုန်းများ၏ Official firmware စုစည်းမှု့ →
4 thoughts on “Probux Company PTC Site ၏ လှို့ဝှက်ချက်နှင့် Premium Proxy တို့၏စွမ်းအား [သို့] Probux မှ အချိန်တိုတို အတွင်း ငွေများများ ရှာဖွေနည်း”	yannaingkyaw says:	October 23, 2013 at 9:48 am	bro yaa http://www.share4mm.com ka problem loading page phit nay tl kyun tot ko yannaingkyaw9@gmail.com ko IP lay pay pay pr nor
Reply	yannaingkyaw says:	October 23, 2013 at 9:48 am	bro yaa http://www.share4mm.com ka problem loading page phit nay tl kyun tot ko yannaingkyaw9@gmail.com ko IP lay pay pay pr nor
Reply	David Terius says:	November 22, 2013 at 4:06 am	hote kae' bro.. ku pay lite pa mal.. fik ng yin .. bro's ph no lay pr pay lox ya ma lr ? kyuntaw lal.. PTC ko try nay tr pr.. problems lay tway shi yin… ask chin lox pr.. thanks bro Reply	David Terius says:	November 22, 2013 at 4:06 am	hote kae' bro.. ku pay lite pa mal.. fik ng yin .. bro's ph no lay pr pay lox ya ma lr ? kyuntaw lal.. PTC ko try nay tr pr.. problems lay tway shi yin… ask chin lox pr.. thanks bro Reply	LeaveaReply Cancel reply	Enter your comment here...